Sivavanye i-USB-C Hub ye-Aukey, i-8-port konke-in-one okugqibeleleyo kwi-MacBook M1 entsha [UPHANDO] Iindaba zeGajethi
Sivavanye i-Aukey's USB-C Hub, i-8-port yonke-in-nye egqibeleleyo yeMacBook M1 entsha [UPHENDO]
UKarim Hmeidan | | Izixhobo
Enye yeengxaki ezinkulu endakha ndadibana nazo xa ndandifumana entsha IMacBook Pro eneprosesa ye-M1 kukusilela kwamazibuko, ingxaki eqhubeka rhoqo ukusukela kwifashoni, ngakumbi kwiApple, kukumilisela izixhobo ezinamazibuko ambalwa nangaphantsi. Amakhwenkwe I-Aukey kufuneka ukuba iyifundile ingqondo yam kwaye yasinika i-8-port USB-C Hub yayo entsha.
Inomdla Hub 8 in 1 apho uya kuyeka ukuba nengxaki yokungabikho kwamazibuko kwiikhompyuter zakho. Ukulula kulula ukusebenzisana nokuguquguquka kwimveliso evela kolunye lweempawu ezikhula ngokukhawuleza kwitekhnoloji yendalo. Qhubeka ufunda ukuba sikuxelela zonke iinkcukacha zale Aukey USB-C Hub.
Yonke into kufuneka ithethwe, yiHub, ungalindeli into ngaphandle kwesiqhelo, a Hub enezibuko ezi-8 eziza kusombulula zonke iingxaki zezibuko esinokuba nayo kuso nasiphi na isixhobo. Yiplagi kunye nokudlala ke kuya kufuneka siyidibanise kuphela kwizibuko le-USB-C ukuze i-Aukey yenze yonke imilingo efunekayo kwimida yethu yokusebenza.
Njengoko ubona kwiifoto, i isixhobo sihle kakhulu, kwindawo «emnyama emnyama» ifana kakhulu nombala iApple yenza iiMacs zayo. Phezulu siza kubona inqanaba elinye elikhokelwayo elingaphazamisi konke konke, y emacaleni sinazo zonke izibuko Amakhwenkwe aseAukey asinika wona.
Njengoko ubona kwigalari yangaphambili, sinamachweba alandelayo:
I-USB-C ngoKuziswa kwaMandla ezakukuvumela ukuba ubize iMac yakho ukuba usebenzisa enye indawo eseleyo ye-USB-C yesinye isixhobo.
EPuerto HDMI iyahambelana nezigqibo ze4K.
3 USB-A amazibuko (2 kubo 3.0 ephawulwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka).
Ikhadi elinye le-SD, iluncedo kakhulu ekuqwalaseleni ukuba iilaptops ezingaphantsi nangaphantsi zibandakanya.
Isithuba sekhadi le-MicroSD.
Izibuko le-Ethernet, nee-LEDs ezimbini eziya kuphawula imeko yoqhagamshelo (asinakukhubaza kodwa azikhathazi kakhulu).
Njengokuba ubona, asinakuphosa naliphi na izibukoNangona kunjalo, kufuneka silumke ukuba sizisebenzisa zonke ngaxeshanye, ngakumbi ukuze iHub ishushu kwaye ingasebenzi kakuhle. Njengengxenye embi ndiza kuthi kwakhona yi-USB-C Hub, akuyiyo iThunderbolt 3, kodwa ngokucacileyo kwixabiso elithengiswayo lukhetho olukhulu. I-Thunderbolt 3 ivumela isantya esiphezulu kwaye ihlala inikwa amandla ngaphandle.
Enye yezinto ezilungileyo zale 8-in-1 USB-C Hub yeyayo ubungakanani, obuphathekayo, Kwaye nabafana abavela kwi-Aukey basibonelela nge icala elihle lokuthwala kunye nayo yokukhusela intambo ye-USB-C yeHub. Ngaphandle kwamathandabuzo, inkcukacha iyaxatyiswa.
Akukho mveliso ifunyenweyo, njengoko ndikuxelela ukuba yi- ukhetho oluhle kakhulu kuye nakubani na othenge iMacBook Pro entsha okanye uMoya nge-M1 processorEkugqibeleni amazibuko anqunyelwe kwaye ngeHub yezi mpawu sinokusombulula ingxaki kumazibuko. Inkqubo ye- Ixabiso lihlala liphakathi kwe- € 35 nangona ungayifumana ngamanye amaxesha kufutshane ne- € 20. Ndiyayincoma, sele ndikuxelele ukuba ayiyondudumo yeHUB kodwa uninzi lwamatyala apho ufuna izibuko elongezelelekileyo unesisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » Sivavanye i-Aukey's USB-C Hub, i-8-port yonke-in-nye egqibeleleyo yeMacBook M1 entsha [UPHENDO]
Uyenza njani inethiwekhi yakho ye-WiFi Mesh ekhaya
Iinkumbulo ze-USB kunye ne-microSD yazo zonke izinto ezisetyenziswayo zeKioxia [UHLAZIYO]